C/raxmaan Caynte oo lix qodob ku qiimeeyay warkii ka soo baxay Mareykanka - Jowhar Somali news Leader
Home News C/raxmaan Caynte oo lix qodob ku qiimeeyay warkii ka soo baxay Mareykanka
C/raxmaan Caynte oo lix qodob ku qiimeeyay warkii ka soo baxay Mareykanka
Wasiirkii hore ee Qorsheynta Qaranka ee dowladdii hore C/raxmaan Caynte ayaa qiimeyn ku sameeyay warka ka soo yeeray Mareykanka ee ku saabsaneyd xaalada siyaasadeed ee dalka iyo baaqa uu u diray dowladda Federaalka inay wada hadal la furto Maamul goboleedyada.
C/raxmaan Caynte ayaa is dul taagay waxa uu xambaarsan yahay warka Mareykanka iyo waaqiciga dhabta ah ee la taagan yahay, maadaama Mareykanka uu yahay deeq bixiyaha ugu weyn.
Halkan hoose ka akhriso qoraalka C/raxmaan Ceynte ku qiimeeyay war murtiyeedkii Mareykanka:-
Haddii hadalkii shalay uu ahaa farriin lasoo dhigay barta Twitter ka, maanta warmurtiyeed faahfaahsan buu Mareykanu soo daba dhigay.
Waxaan arkay dad badan oo leh “dal madax bannaan ayaan nahay, shisheeyana hadal ugama furna amuuraheenna gudaha.
Waxaan dhihi lahaa, fadlan qiimeeya qodobbadan soo socda:
1. Soomaali heshiis ma aheyn tan iyo 1969-kii markii askartu qoriga caaraddiis ku qabsatay dalka, dastuurkii heshiiska lagu ahaana ay laaleen.
2. Soddonkii sano ee u dambeeyay, colaad sokeeye ayaa na ragaadisay. Reer walbana xaafaddoodii ayay ku laabteen markii lagu heshiin waayay qarankii naga dhaxeeyay.
3. Inkastoo aan dowlad caalamku aqoonsan yahay leennahay, haddana wali ma lihin tiirarka dowlnimada waarta, sida heshiis bulsho (dastuur), si dhab ahna loogama heshiin colaaddii gaamurtay. Dadkuna madaxdooda ma doortaan.
4. Dowladdeennu kam taliso inta badan dalka oo gacanta ugu jira dowlad goboleedyo iyo Al-Shabaab. Inta ay gacanta ku haysana waxaa ku ilaalinayay 20 kun oo AMISOM ah 14-kii sano ee lasoo dhaafay.
5. Ku dhawaad 70% miisaaniyadda Dowladda waa deeq ka timid saaxiibbada Soomaaliya.
6. Deeq bixiyaha ugu weyn 20kii sano ee lasoo dhaafay, isla markaana ah dalka ay ciidankiisa cirku joogtada ula dagaallamaan argagixisada Shabaab, waa Mareykanka. Intaas ayaana xaq u siineysa inuu talo usoo jeediyo madaxda Soomaalida. Haddii aan heshiis aan laheynna looma baahdeen taladaas.
Runtaas sida sibirka u qaraar haddaannaan isku sheegin, dhalanteed ayaan isugu bishaareyneynaa.
Madaxweyne Farmaajo iyo dooddii xalay: Su’aalihii jawaabahooda ku adkaaday iyo Ka qeyb galayaashii la soo xulay